Sajhasabal.com | Homeदार्चुलाका एक युवाद्वारा नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई खुलापत्र
आदरणीय दिलेन्द्र प्रसाद बडू ज्यु,
नमस्कार, म अहिले काठमाडौँ मा बस्छु । काठमान्डौ, सपनाको सहरमा आफ्नो सुन्दर भबिष्य खोज्न भौतारिएको एक जोश जागर शाहस आट र सकारात्मक सोच भएको युवा भन्न रुचाउछु आफुलाई । मेरो परिचय धेरै छैन, भन्दा पनि नभनौ । मलाइ थाहा छ अहिले तपाइँ दार्चुलामा हुनुहुन्छ । चुनाबी माहोलले अरुलाई जस्तै तपाईलाई नि छोएको छ, अझै बढी । समयको बहुतै किम्ती छ होला, तर मलाइ आशा छ मेरो यो पत्रलाई सहर्ष रुपमा लिनु हुनेछ ।
तपाइँ गृहजिल्ल्ला दार्चुलामा मात्रै हैन नेपालको राजनीतिको केन्द्रमै हर हमेसा रहिरहनु भएको छ । तपाइँ आफु सम्बद्द पार्टी नेपालि काँग्रेसको मौजुदा केन्द्रीय सदस्य हो । पार्टीको पूर्व प्रबक्ता जस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन मान्छे दार्चुला जिल्लाले पाउनु खुशीको कुरा हो । पार्टिको केन्द्रीय सदस्य मात्रैले तपाइको परिचय कम हुन्छ । तपाइँले दार्चुला जिल्ला बाट दुइ चोटी जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने मौका पनि पाउनु भएको हो । समय समयमा गरि ३-४ मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पनि पाउनु भएको थियो । समग्रमा तपाइँ केन्द्रीय सत्ताको वरिपरी बिशेस रुपमा बढी केन्द्रित भएको र केन्द्रीय नेतृत्व संग राम्रो पहुंच भएको नेता मध्धे मै पर्नु हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको प्रबक्ता पदलाई पदाधिकारी जतिकै मानिन्छ । देशको प्रमुख दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेको र बारम्बार सरकारको नेतृत्व लिन पाएको नेता हाम्रो जस्तो बिकट र पिछडिएको क्षेत्रले पाउनु आफैमा गौरब र सान हो ।
तपाइँ दार्चुलाको शिर्ष नेता हो भन्नेमा कुनै पनि दार्चुलेली जनतामा भ्रम र संका छैन । शिर्ष नेता हुनुको नाताले तपाइँ संग दार्चुलेली जनताको आशा भरोशा हुनुलाइ अन्यथा मान्न सकिन्न्न । दार्चुलाको जनताको वास्तविक समस्या के हुन् र ति समस्याको समाधान कसरि गर्ने भन्ने कुरा तपाइँ जतिको कसलाई थाहा होला र ? दार्चुलाको भूगोल र जनजीविका बारे तपाइँ बर्षौ देखि जानकार हुनुहुन्छ । तपाइँ दुइ पटक यहि जिल्ला बाट जितेर केन्द्रमा जानु भएको यथार्त हो । र पछिल्लो २०६४ तथा २०७० सालको दुइ संबिधान सभाको निर्बाचनमा हार व्यहोर्नु भएको कुरा नि सहि हो । तपाइले जतिपटक चुनाबको सामना गर्नु भयो त्यतिनै पटक केहि न केहि जनतामा आफ्ना अलिखित तर मौखिक प्रतिबद्दताहरु गरेको कुरा सबैलाई थाहा होला ।
तपाईले पहिले कसरि जित्नु भयो र अहिले कसरि हार्दै हुनु हुन्छ भन्ने अरुको नभएनी म पंतिकारको चासोको बिषय पक्कै बन्यो । म सानै थिए हुला जतिबेला दार्चुलामा तपाइको पार्टी काँग्रेस र राजाबादी पार्टी राप्रपाको सबैभन्दा बढी हाइहाइ हुन्थ्यो । तिनीहरुकै नेता र कार्यकर्ता मात्रै देख्न पाइन्थ्यो । चुनाब नजिकियो भने त अरु पार्टीले प्रचार समेत गर्न नसकिने अवस्था सृजना हुथ्यो । भन्नुको तात्पर्य तपाइको पार्टी जनसंगठनको हिसाबले त्यति शाक्तिशाली थियो । मेरो गाउमा केहि परिवार र व्यक्ति मात्रै गैर काँग्रेस थिए, अरु सबै काँग्रेस । तपाइको पार्टीको इतिहास दार्चुलामा पनि गर्बीलै थियो ।
तपाईलाई कति याद छ या छैन तर मलाइ अझै पनि झल्झली याद आइराखेको छ । तपाइले पहिलेको धारी गाबिसको धारिपाटा माविमा एउटा मननयोग्य भाषण गर्नु भएको थियो । पहिलेको धारी, ब्रम्देबलाई पायक पर्ने "गर्खाभिन्ना" र हिकिला र पिपलाचौरीको पायक पर्ने "भाड़ी"मा खाद्यान्न डिपो खोल्ने उदघोस गर्नु भएको थियो । त्यतिमात्रै हैन हुति गाबिस धौलाकोट गाबिस र सुन्सेरालाई पायक पर्ने गरि सुन्सेरामा खाद्यान्न डिपो को स्थापना गर्ने घोषणा नै गर्नु भएको थियो । मलाइ याद भएसम्म प्रत्येक घरमा एक व्यक्ति रोजगारी र प्रत्येक घरमा पानीको धाराको व्यवस्था हुनेछ भन्ने कुरा नि त्यहि अवसरमा राख्नु भएको थियो । अ एउटा कुरा भन्नै बिर्सेको धारिपाटा स्कुललाई स्थायी बनाउछु समेत भन्नु भएको थियो । म त्यहि ठाउँको स्थायी बासिन्दा भएकोले पुरानो कुरालाई सम्झिने प्रण गरे । त्यो त एउटा चुनाबी प्रचारप्रसारको दौरानमा एक ठाउमा भनेको एक तितो/सत्य भयो । एक भुल्नै नसकिने उदाहरण हो । तर तपाइले अहिलेसम्म एउटा चुनाबको मात्र सामना गर्नु भएको पक्कै हैन । एक ठाउमा मात्रै भाषण गर्नु भएको नि होइन होला । दार्चुलामा त्यतिखेर ४१ गाबिस थिए । ४१ गाबिसमै चुनाबी सभा भए होलान, त्यो पनि हरेक चुनावकै समयमा । यसरि हेर्दा तपाइले सबै ठाउँमा उत्तिकै र उस्तै कुराहरु दोहोर्याएको पक्कै पनि हो ।
मैले देखेका र सुनेका अघिल्ला २ चुनाबमा तपाइले जित्नु पनि भयो । दार्चुलेली जनताको सपनाको पोको पुन्तुरोलाई लिएर राजधानी पस्नु भयो । केन्द्रमा राम्रै पहुंच भएर हो या तपाइको व्यक्तिगत क्षमता खुबीले हो । सहायक, राज्य मन्त्रि बन्ने मौका पनि पाउनु भएकै हो । तर यति वर्ष भयो ति तपाइले गरेका भाषणहरु न पुरा भएका छन न हुने चरणमा । म अहिले त्यो गाउँमा जाँदा अहिले पनि जनताको गुनासो त्यहि तपाइको पुरानो भाषण छ । दार्चुलेलि जनताहरु अहिले तपाइँ अनि तपाइका कार्यकर्ताहरुलाई यी र यस्तै प्रश्न गरिराखेका हुन्छन् । तर बिचरा उनीहरु नाजवाफ हुन्छन्, झारा टार्ने कुरा गरेर जनतालाइ अल्मल्याउछन् ।
आदरणीय बडू ज्यु,
साच्चिकै दार्चुलेली जनताले तपाइको यो अहिले जुन ठाउमा हुनु हुन्छ त्यहा पुगाइ सकेपछी किन पछाडी फर्केर हेर्नु भएन ? किन जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नु भयो ? गरेका प्रतिबद्दता हरुलाई कसरि भुल्न सक्नु भयो ? दार्चुलाको वास्तविक समस्या यहालाई राम्रो गरि थाहा हुँदाहुँदै आखिर किन समाधानको पहल गर्न सक्नु भएन ? जितेन भन्नलाइ बारम्बार जिताएकै हो, मन्त्रि हुनु भाकै हो । तर पनि दार्चुलाका समस्या जहाका त्यहि छन् । एउटा नेताको हिसाबले मात्रै हैन दार्चुलेली नागरिक हुनुको नाताले यहाको अहम कर्तब्य हुन् आउछ । तपाईका आफ्ना कार्यकर्ताहरुले तपाइले काम नगरे पनि जयजयकार गाउनु भएको छ । तपाइको अन्तरहृदयलाई राम्रो गरि थाहा छ तर भन्न र बाहिर खोल्न सक्नु हुन्न कि जनताको पक्षमा पक्कै काम गरेको छैन, भएको छैन ।
तर तपाइले स्याबासी भन्दा आरोप बढी खेप्दै आउनु भएको छ । दार्चुला जिल्लालाई "पिछडीएको क्षेत्र" बाट हटाउनमा यहाँको अहम भूमिका छ रे । त्यस्तै अर्को बिषय जो दार्चुलालाई चिनाउने सान हो, कालापानी । त्यसको बारेमा अहिलेसम्म संसदमा बोल्नु भएको छैन रे । पछिल्लो समयमा दार्चुलाकै लिपुलेकमा भारत र चिन बिच व्यापारिक सम्झौता हुँदा बोल्नु भएन रे, आवस्यक कुटनीतिक पहल कदमी पनि गर्नु भएन रे । महाकाली मा २०७१ सालमा आएको बाढीलाई अधिकांस बाढीपिडितहरुले "छिर्किल्ला" डामलाई भारतले नेपाल पक्षलाई जानकारी नदिइ एकतर्फी हिसाबले खोलेकोले दार्चुला सदरमुकाम बगायो भन्यो तर तपाइले त्यसको उल्टो भारतलाई सहज हुने गरि बोलेको बिर्सिनु भएको छैन होला । कति साचो झुटो हुन् तपाइँ नै जान्नुस ।
निर्बाचनमा जनतालाई "भोट बैंक" बनाउने र जितीसके पछी जिल्ला कहिले नफर्किने तपाइको बानीले गर्दा बिगतका दुइ चुनाबमा नराम्ररी हार ब्यहोएको हो भन्नमा मलाइ कन्जुसाई छैन । त्यति मात्रै होइन जिते पछि तपाइलाई "नाताबाद, किर्पाबाद र धनबाद" ले खुबै गाज्दो रहेछ । दुइ चार जना कार्यकर्ताको सिफारिसलाई जनताको प्रतिनिधि सिफारिश मान्नु र जनतामा कहिले नजाने जमातको नेता तपाइँ हुनु नै तपाइको बिडम्पना हो । मेरो कुरा साचो होइन भने दार्चुलामा तपाइको जति "हाइट" भएको अरु कुन नेता थियो ? किन अहिले तपाइलाइ सबैले जित्दैछन ? किन तपाईलाई अहिले राजनीतिमा धौधौ भैराखेको छ ? हुँदा-हुँदा प्रतक्ष्यमा तेस्रो चोटी पनि जित्न नसकिने अवस्था आउनुलाई आफ्नो हैसियत खस्केको मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? मलाइ त लाग्छ यदि तपाइले सुरु देखि नै जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई अनुशासित हिसाबले पुरा गरेको भए र दार्चुलाको बिकास र सम्ब्रिदिमा आफुलाई केन्द्रित गरेको भए दार्चुलामा अर्को नेता जन्मदैनथ्यो होला । जन्मे पनि प्रभाब तपाइको, तपाइको पार्टीको हुन्थ्यो । तपाइ अनि तपाईका कार्यकर्ताहरु अरुले गरेको बिकासमा आफ्नो स्वामित्व लिन तल्लिन देखिनुभयो । हुँदा/नहुँदा कुराहरु जनता माझ लैजाने कुचेस्ठा गर्नुभयो । यस्ता प्रोपोगान्डाहरुले केहि हदसम्म सफलता पनि पाउनु भयो । तर तपाईलाई थाहा छ यो सबै क्षणिक कुरा मात्र हुन् । यो महान गल्तिलाई अंगालेर तपाइँ अनि तपाईका कार्यकर्ताले राजनीतिक भबिस्य देख्नु आफैमा हास्यास्पद हुन आउछ । यी र यस्ता कामहरुले तपाईको हैसियत माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ । आशा छ तपाई यो बारेमा सचेत हुनु हुन्छ ।
आदरणीय दिलेन्द्र बडू ज्यु,
अहिले तपाइँ व्यक्तिगत रुपमा पर्ताक्ष्य उम्मेदवार बनेर निर्बाचनमा होमिनु भएको छैन । यसपाली अरुलाई 'चान्स" दिनु भएको छ । अरुले "चान्स" पाएका हुन् या कुनै अर्कै स्वार्थ प्रेरित कुराले काम गरेको छ तपाइँ नै जान्नुस । म अनि म जस्ता हजारौ "शैक्षिक बेरोजगार" युवा चाहन्छौ अब झुटको राजनीति बन्द होस् । जागिर लगाई दिने नाउमा अझै नअल्झ्याउनुस । तपाइको उहिलेको जामानामा केहि "भनसुन" ले पनि काम गर्यो होला तर अहिले जागिर खान आफुमा दक्षता योग्यता हुन जरुरि छ । खुला प्रतिष्पर्धाबाट अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा कम्तिमा अबका दिनमा आस्वासन नहोस । चुनाबलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि जे पनि गर्न सक्ने तपाइँ अनि तपाईका कार्यकर्ताहरुले त्यस्तै आस्वासन दिएका व्यक्तिले अहिले खाडी मुलुकमा ५० डिग्री को घाममा भेडा चराउनु परेको छ । हामी चाहन्नौ हाम्रो पनि त्यस्तै हालत होस् । आज यो खुला पत्र लेख्नुको कारण तपाइले दार्चुलेली जनाताको लागी के गर्नु भएछ । तपाइको बिगत के कस्तो जनमानसमा रह्यो भन्ने त हो नै साथमा एउटा कारण तपाइको चुनाबी फोस्रा आस्वासनका कदम समयमै रोकियोस भन्नलाई पनि हो ।
अझै पनि तपाइले पारिवारिक घेरा भन्दा आफुलाई बाहिर ल्याउने कोशिस गर्नुभयो, केहि लोभीपापी कार्यकर्ताको चंगुल बाट छुटकारा पाउनुभयो, फरक पार्टीको अस्थित्वलाई स्वीकार गरेर बिकासमा साझेदारी गर्ने चेत पलायो भने तपाइको अभाव दार्चुलेली जनताले पक्कै महशुस गर्लान । हैन आफुलाई बिगतको अनुभव र बर्तमानको जिम्मेवारीले भबिस्यबोध गराएँन भने अरुले "आरोप" लगाए जस्तै सधै केन्द्रमुखी, नेतामुखी राजनीति गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न्न ।
अलिअलि आक्रोस र उत्तेजनाले भरिपुर्ण पत्र भए पनि यो पत्रले यहाँ अनि सम्बन्धित सबैको चेत खुल्नेमा म ढुक्क छु । धन्यबाद, अभिबादन ।
- बिरेन्द्र महरा